Isitudiyo se-Snug, Luxury Family e-Bourne - I-Airbnb
Isitudiyo se-Snug, Luxury Family e-Bourne
Ifakwe enhliziyweni yeBourne Market Town, iSnug iyindlu enkulu yesitudiyo yabantu abadala ababili, ingane eyodwa nengane eyodwa. Yonke iyazilawula uma iphansi futhi inomnyango wayo wokungena ngakho ifinyeleleka kalula kubasebenzisi bezihlalo ezinamasondo kanjalo nezihlalo eziphushayo.
Umbhede ongu-1 x wenkosi (izinto zokulala namathawula anikeziwe)
1 x Umbhede ogoqekayo ongusayizi owodwa (izinto zokulala namathawula anikeziwe)
1 x Umbhede wokuhamba (izinto zokulala namathawula anikeziwe)
Itafula lokugqoka elinesibuko
I-Smart TV ne-Wi-Fi
Indawo yokupaka YAMAHHALA ngaphandle komgwaqo yemoto eyodwa
Ibanga lokuhamba (imizuzu emi-2) ukuya ezitolo/izindawo zokudlela/amabha
Eduze kwe-Marks & Spencer's Food Hall
I-induction hob, ihhavini likagesi, iMicrowave neFridge/Ifriji enkulu
Izitsha, izibuko, izinkomishi nezinto zokusika
Itiye, ikhofi, ushukela nobisi
Igumbi lokugezela elihlanganisa, ishawa yamanzi ashisayo kagesi, iWC nosinki
Zonke izingubo zokulala namathawula anikeziwe kuhlanganise nengane nengane
Itafula lokudlela nezihlalo ezi-2 (nezihlalo ezengeziwe nesihlalo esiphezulu sinikezwe)
Ngena ngemva kuka-3pm (nge-keysafe) / Phuma ngaphambi kuka-10am
Ngicela uvele ubuze ukuthi ungathanda yini ukungena/uphume ngaphambi kwesikhathi noma kamuva futhi ngizokwenza konke okusemandleni ami ukukuhlela :)
Leli fulethi elihle le-studio lenzelwe ukukunikeza ikhaya elihle usekhaya, futhi lilungele wonke umuntu ukusuka kumuntu oyedwa osebenza kude nebhizinisi, emndenini omncane.
I-Snug inombhede olingana nenkosi, umbhede owodwa ogoqwayo, ikhishi kanye negumbi lokugezela elibushelelezi. Konke okudingayo ukuze uthole ikhefu lokuphumula kuzohlinzekwa, okuhlanganisa izisekelo zasekhishini, ilineni lombhede namathawula.
Ikhishi linempahla esezingeni eliphezulu, ehlanganisa ihhavini ye-SMEG, i-induction hob, umshini wokugeza izitsha, iMicrowave, i-toaster kanye nefriji/Ifriji yosayizi ogcwele.
Uma uza nomntwana, sicela usazise futhi sizokunikeza umbhede wokuvakasha onomatilasi, isihlalo esiphezulu namathoyizi amaningi ukuze uwagcine ejabulile. Futhi sinemidlalo nezincwadi ozozijabulela.
IBourne iyidolobha leMakethe elithandekayo elinenqwaba yezitolo, izindawo zokudlela kanye nezindawo zokudlela emnyango wakho kodwa futhi iqhele ngamakhilomitha ayi-10 kuphela ukusuka eStamford, futhi inezixhumanisi zokuhamba ezihamba phambili eziya ePeterborough. Singancoma uhambo oluningi oluthandekayo noma izinsuku zokuphuma endaweni yasendaweni okuzoba sephaketheni lakho lokwamukela lapho ufika.
Ngijabulele ukuhlala ubusuku obubodwa - sicela uthumele umyalezo ukuze uthole ulwazi olwengeziwe
Sathuthela e-Bourne ngaphambi nje kukaKhisimusi futhi siyithanda ngokuphelele. Nakuba indlu yethu imaphakathi nedolobha, futhi iyindawo ethule ngendlela emangalisayo futhi bonke omakhelwane bethu banobungane kakhulu. I-M&S foodhall ingaphansi komzuzu ongu-1 ukuhamba okuhlala kuwusizo, kepha kukhona nezitolo eziningi ezinhle nezindawo zokudlela nje imizuzu embalwa phambili. Kunokuningi kokuhamba okuhle okuzungezile kufaka phakathi i-Bourne Woods kanye nendawo engcwele yezimbongolo!
Sihlala eduze neSnug futhi ngizokunikeza nenombolo yami yeselula uma kukhona okudingayo